छोटो समयमै चर्चा पाएका भट्टराईलाई स्केच आर्टिस्टका लागि फिल्ममा अफर
On: २०७६ फाल्गुन ६ गते, मंगलवार, ०६:५२ बजे प्रकाशित
अन्जु सेन्चुरी। भन्ने गरिन्छ नी चित्रकला मानव प्राण वा आत्मामा भण्डारण गरिएको गुलियो र मिठो मह हो। कलाको यही मिठो मह बोकेर म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका भाईवाङ घर भइ आफ्नो उज्जल भविष्यका लागि काठमाडौँ भित्रिएका अर्जुन भट्टराई अहिले यही कलामा रमाउन थालेका छन्।
ब्यक्तिको भाग्य र चरित्र कोर्ने जिम्मा उ स्वयमको हुन्छ ,तर कसैको जिन्दगिको सुन्दर चित्र कोर्न सक्ने क्षमता कसैसङ्ग छ भने त्यो हो मात्र चित्रकार! भट्टराइ अर्जुन भन्छन् मलाइ यो कला भगवानले आशिर्वाद स्वरुप दिनुभएको हो जस्तो लाग्छ किनकी मैले आजसम्म जतिपनी चित्र कोरे त्यसमा कसैको साहारा लिएको छैन।
मैले स्कुल जान थाले देखी र पेन्सिलले अक्षरहरु लेख्न सिकेदेखी नै कुनै चिजहरुको चित्र कोर्न थालेको हु। मलाइ केही न केही बनाउन मन लाग्थ्यो , मैले सानो छदा आफ्नै हातले बनाएका काठको हलो,खुकुरी , घर , पंखा, चुराहरु संकलन गरेर बनाएको मोज्याक अनि पेपरबाट बनाएको मिल, अझ मोटर जोडेर गाडी बनाएर मैले आगनमा गुडाउदा मेरो बाबुआमा र परिवारको मुहारमा छुट्टै खुशी छाउने गर्दथ्यो।
मैले सानोमा बनाएका कुराहरु अझैपनी घरमा सुरक्षित छन, जब म घर पुग्छु ती चिज देख्दा बडो आनन्द लाग्ने गर्दछ। हुन त कसको बुबा आमाको आफ्नो सन्तानले राम्रो पढेको अनि ठूलो मान्छे भएको हेर्ने रहर हुदैन र? त्यसमा पनि प्राय जसो बुबा आमाहरू आफ्नो सन्तान डाक्टर इन्जिनियर बनेको हेर्न चाहन्छन्। अर्जुनको बुबाको पनि यही सपना थियो। आफ्नो छोरा डाक्टर भएको हेर्ने।
अहिले पनि अभिभावहरूले के भन्छन्। त्यही गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छँदै छ। कतिपयले आफ्नो चाहना अनुसारको काम गर्न सङ्घर्ष नै गर्नु पर्छ। यही सङ्घर्ष अनुरूप भट्टराइ अर्जुन सेतो कागज र रङ्गहरूको सहारामा रमाउन थाले।
शिक्षण पेशामा रहेका उनका बुबाले डाक्टर वा इन्जिनियर बनाउन काठमाडौँ पढ्न पठाएका थिए। उनले निरन्तर ‘स्केच’ बनाउन थाले भट्टराईको चाहना मोडियो। ख्याल ख्यालमा स्केच गर्दा राम्रो बन्न थालेपछी उनलाई आफ्नै कारणले कतै अभिभावकको आकाङ्क्षा पूरा नहुने त होइन? भन्ने भान भयो र स्नातक तहमा ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन (बिसिए) मा भर्ना भए।
भट्टराई पछिल्लो एक बर्ष अघि देखि व्यावसायिक ‘स्केच’ बनाउने पेशामा संलग्न छन्। भट्टराई भन्छन् ‘स्कुल जीवनमा स्केच बनाउने वातावरण थिएन। भित्री चाहनालाई खुम्चाएर राखेको थिए। जव म काठमाडौँ पुगे गुगल र युट्युबमा सर्च गरे स्केच बनाउन सिके। नियमित ‘स्केच’ बनाउन गुगल र युट्युबको सहयोग लिएको कारण मलाई ‘स्केच’ बनाउने तालिम केन्द्रहरूको ढोकामा पुग्नै परेन।’
उनी अहिले सयौँ ‘स्केच’ बनाएर थाक्दैनन्। उनको सहारा नै ‘स्केच’ बनेको छ। भन्दा फरक नपर्ला। ‘यो पेशामा सुन्दर भविष्य देखेको छु, ‘रातको समयमा स्केच बनाउन सजिलो हुन्छ।, एकान्तमा बनाउने ‘स्केच’ बाट मलाई धेरै सन्तुष्टि मिल्छ।’ अहिले उनी ‘स्केच’ बाट राम्रो कमाई गर्न थालेको पनि बताउँछन्।
उनी भन्छन् एउटा स्केचको १५ सय देखि ५ हजारसम्म लिने गरेको छु। जोडीको स्केचलाई समय धेरै लाग्ने भएकाले अलिक महंगो हुन्छ। फोटोलाई चित्रमा उतार्न दैनिकजसो विभिन्न माध्यमबाट कोठामा अर्डर आउने गर्छ। विदेशमा रहेका चिनजानकाले पठाउने गरेको फोटोलाई आकृतिमा उतारेर पठाउने गरेको छु। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले पनि मेरो यो पेशालाई फराकिलो बनाइदिएको छ। अहिले म ‘स्केच’ गर्न भ्याइ नभ्याइ छु।
अन्य सम्बन्धित समाचार: गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि दिइएको समयसीमा आज सकिंदै
‘स्केच’ वास्तविकतामा आधारित हुन्छ। विना तालिम आफ्नै मेहनतले ‘स्केच’ बनाउन थालेपछी मेरो अभिभावकहरु धेरै खुसि हुनुहुन्छ। अनि म पनि खुसि छु।’ ‘अहिलेसम्म करिव डेढसय ‘स्केच’ बनाइसकेको छु। मैले एउटा ‘स्केच’ बनाउनमा ८ देखि १४ घण्टासम्म पनि विताएको छु। अहिले जन्मदिनमा अन्य उपहारभन्दा ‘स्केच’ बनाएर दिने चलन बढेको छ। त्यही कारण यसमा धेरै व्यस्त भएको छु। विभिन्न कलाकार तथा प्रख्यात व्यक्तिहरुको स्केच बनाएर उपहार पनि पठाउँने गरेको छु।’
भट्टराई युवाहरुलाई सहयोग गर्न चाहन्छन्। ‘भविस्यमा लाइभ पेन्टिङ लगायत ‘स्केच’ बनाउने रुची भएका यूवाहरुलाई तालिम लगायत आवश्यक सहयोग गर्ने उनको योजना रहेको छ।’ पछिल्लो समय पेन्टिङ ब्यवसायमा यूवाहरूको सक्रियता बढिरहेको अवस्थामा यूवा चित्रकारहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको उनी बताउछन्।
अर्जुनले पछिल्लो समय मान्छेको बाहेक पर्यटकीयस्थल, मठमन्दिर लगायतका पेन्टिङ समेत गर्ने गरेका छन्। सामान्य चित्रकोर्ने दिनहरुलाइ धकेल्दै अहिले चलचित्र सम्म पुगे, हालसालै उनले चपली हाईट–३ मा ‘स्केच’ चित्रकारको भूमिका पनि निभाएका छन्। उक्त चलचित्र आगामी चैत्र २८ गते प्रदर्शन हुदैछ।
भट्टराइ अर्जुन भन्छन् ‘मलाई टेक्निकल विषयमा चासो थियो। त्यसैले (बिसिए) मा भर्ना भए अब स्नातक तह पछि स्नातकोर चाहि सव इन्जिनियरबाट गर्ने सोच रहेको छ।’ अहिले म ‘थ्रि डी’ आर्ट सिक्दै छु, यो पेशामा विश्वका लोकप्रिय चित्रकारहरूलाई इन्टरनेटबाट खोजी रहेको छु अहिले मलाई मान्छेको नक्सा बनाउने यूवा भनेर समेत बोलाउने गर्छन्। यो उपनामले मलाई हौसला दिएको हुन्छ।’ ‘स्केच’ बनाउँदा कागज, इरेजर, पेन्सिलको आवश्यकता पर्ने बताउँदै उनी भन्छन, ‘चुनौती र जटिलताहरूलाई मेरो मेहनतमा लुकाउने गर्छु।’
२०७६ फाल्गुन ६ गते, मंगलवार, ०६:५२ बजे प्रकाशित